Kacdoon Shacab – Shafeec blog
Boqor ka talinaye dhul balaaran oo qeyraad dabiici ah Alle ku maneystay, dhul beeraad iyo bad kaluunku afka joogo. Nasiib xumo dadka ku hoos nool xukunka boqor tooyada ayaa ah dad faqri ah oo nolol ahaan aad u liita.
Boqorkaas dadka uma cadaalad fali jirin, waxaa jiray dad aan dambi laheyn oo lagu xugmiyo dil iyo xabsiyo arxan daro ah.
Hantida dadka ayey boqortooyadu sidey rabto ka yeelan jirtay waxaana la iskugu daray dhac iyo boob.
Qofkii beer tabcada ma uusan heli jirin suuq uu u iib geeyo maadaama boqortooyadu eysan xiriir fiican la laheyn wax ka baxsan xeyn daabka ku hareereysan.
Boqorka ayaa sanad walba dadka inta iskugu yeero wuxuu dhihi jiray qof iga fiican haduu jiro waan u baneynayaa xukunka.
Hadii lahelo qof isusoo taaga xilka ayaa dadka meel fagaaro ah hal hal loo weydiin jiray maku qanacsantahay ayadoo ey lasocoto handadaad iyo cabsi galin markaas ayey dadku dhihi jireen “maya”.
Muddo aad u dheer kadib, ayaa maalin maalmaha kamid ah boqorkii sida caadada aheyd dadkii intuu kulmiyay ku yiri qof iga fiican haduu jiro waan u baneynayaa xilka.
Nin waxaa soo istaagay dadku ey aad u jeclaayeen laguna ogaa daacadnimo, cadaalad iyo dad jaceyl, boqorkii sida caadada aheyd ayuu u bilaabay dadkii inuu weydiiyo su’aashii aheyd “maku qanacsantihiin ninkaan inaan ku wareejiyo xukunka” wiil dhalinyara ah oo ugu horeeyay ayaa ku jawaabay “Haa” cod dheer ah, boqorkii ayaa ku yiri “kafiirso hadalkaas wiilyahow” wiilkii ayaa si’ dhiiran ku yiri marlabaad “Haa waanku qanacsanahay waana kii faqriga naga saari lahaa”.
Tobankii qof ee ugu horeysay markii ey “Haa” ku jawaabeen ayuu boqorkii gasha kala baxay seef uu gacanta ku watay, intii hartayna ayagoo dhiifoon ayey raadkii wiilka raaceen oo “Haa” wada yiraahdeen.
Boqorkii ayaa isku dayay in xukunka oow xoog kusii heysto balse nasiib wanaag dadkii iyo halyeygii ey doorteen ayaa gacanta ula tagay ciidankii boqortooyada kana tuuray xukunkii ragaadiyay dadka dhulkaas dagnaay.
Boqorkii cusbaa ayaa xushay dadka dadkii ugu xigmad iyo caqliga badnaa, wuxuu sidoo kale cagta mariyay dabadhilifkii u shaqeyn jiray boqorkii hore.
Wuxuu dadkii ka dalbaday iney is cafiyaan oo isku duubnaadaan si loo helo nabad iyo barwaaqo waarta.
Sidoo kale wuxuu bilaabay olole loogu magac daray “Gacantaada ku dharag” oo qeyraadkii aad looga faa’iideystay.
Boqortooyadiina waxey noqotay mid barwaaqo ah oo aad u xoog badan kana tilmaaman boqortooyinkii la dariska ahay dadkiina halkaas ayey baraare iyo bash bash ku gaareen.